Ubusi Uyilo lwebhokisi yesipho sobusi luphefumlelwe "kukuhamba kwendalo" kweShennongjia ezinezityalo zasendle ezininzi kunye nendawo elungileyo yendalo. Ukukhusela imeko yendalo esingqongileyo ngumxholo woyilo woyilo. Uyilo lwamkela ubugcisa bendabuko obunqunywe ngamaphepha amaTshayina kunye nobugcisa botopu ukubonisa ubume bendalo kunye nezilwanyana ezintlanu ezinqabileyo nezisengozini yokugcina izilwanyana ezikhuselekileyo. Iphepha elomileyo kunye nephepha leenkuni lisetyenziswa kwizinto zokupakisha, ezimele ingcinga yendalo kunye nokukhuselwa kwendalo. Ibhokisi engaphandle ingasetyenziselwa njengebhokisi yokugcina iimpahla ukuze iphinde isetyenziswe.
Isitovu Ekhitshini Esi sihlalo senzelwe ukunceda umntu agcine ukungakhethi cala kokuhlala. Ngokujonga indlela abantu abaziphatha ngayo mihla le, iqela loyilo lafumanisa ukuba kufuneka abantu bahlale kwizitulo zexesha elifutshane njengokuhlala ekhitshini ixesha lekhefu elikhawulezileyo, nelikhuthaze iqela ukuba lenze esi situlo ngokuthe ngqo ukuze silungiselele ezo ndlela yokuziphatha. Esi sihlalo senziwe ngezinto ezincinci kunye nezakhiwo, nto leyo eyenza ukuba izitovu zingabizi kwaye zingabizi iindleko kubo bobabini abathengi nabathengisi ngokuthathela ingqalelo ukuveliswa kwemveliso.
I-Infographic Ene-Gif Egcweleyo
I-Infographic Ene-Gif Egcweleyo Iprojekthi yokuKusebenzisa amava amaNqaku aMnye yinto enkulu yeDatha ebonisa iinkcukacha ezinje ngeenjongo, uhlobo, kunye nokusebenzisa iindwendwe kwiivenkile ezintsonkothileyo. Iziqulatho eziphambili zibunjwe ngama-Insights amathathu abamele ukuvela kohlalutyo lweDatha enkulu, kwaye acwangciswe ukusuka phezulu ukuya ezantsi ngokomyalelo wokubaluleka. Iigraphics zenziwa kusetyenziswa ubuchwepheshe be-isometric kwaye zahlulahlulwe ngokusebenzisa umbala omele isifundo ngasinye.
Imifanekiso Bhanyabhanya Ifilimu yobugcisa "UMfanekiso kaMoses" wakhutshwa njengephosta yengcinga. Ibalisela ibali lentombazana eyayihlaselwa ngokwesini. Imhlophe ihlala inomzekeliso wokufa kunye nomfuziselo wobumsulwa. Le postera ikhetha ukufihla umyalezo "wokufa" emva kwendawo yentombazana ethe cwaka kwaye ithambile, ukwenzela ukuqaqambisa imvakalelo enamandla emva kokuthula. Kwangelo xesha, umyili udibanise izinto zobugcisa kunye neesimboli ezinokuhombisa kumfanekiso, obangela ukucinga ngakumbi nokuphononongwa kwemisebenzi yefilimu.
Ibhanti Yokuhlamba Impahla Ngaphakathi
Ibhanti Yokuhlamba Impahla Ngaphakathi Le ibhanti yokuhlamba impahla esetyenziswa ngaphakathi. Umzimba olungeleleneyo omncinci kunephepha laseJapan elibonakala ngathi ngumlinganiso wetheyiphu, ukugqitywa okuthe tye ngaphandle kwesikhewu kumphezulu. I-4 m ubude ibhanti inemingxunya engama-29 iyonke, umngxunya ngamnye unokugcina kwaye ubambe i-hanger yengubo ngaphandle kweengubo zokunxiba, isebenza ngokukhawuleza ukoma. Ibhande elenziwe nge-antibacterial kunye ne-anti-mold polyurethane, ekhuselekileyo, ecocekileyo kwaye yomeleleyo. Umthwalo omkhulu ngama-15 kg. Ii-pcs ezi-5 zokugweba kunye nomzimba ojikelezayo zivumela ukusetyenziswa kweendlela ezininzi. Encinci kwaye ilula, kodwa oku kuluncedo kakhulu kwinto yokuhlamba iimpahla ngaphakathi. Ukusebenza ngokulula kunye nokufakwa okufanelekileyo kuya kulunga naluphi na uhlobo lwegumbi.
Baan Isidlo Sangokuhlwa Sekhabhathi Tuesday 5 July
LOTUS Iseti Yokuhlambela Monday 4 July
Electra Iifeksi Sunday 3 July
Iphakheji Yokutya Ubusi Isitovu Ekhitshini I-Infographic Ene-Gif Egcweleyo Imifanekiso Bhanyabhanya Ibhanti Yokuhlamba Impahla Ngaphakathi